“ ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ . . . .´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » “ ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ . . . .´´
“ ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ . . . .´´
Posted by ခင်ခ on Feb 19, 2013 in Health & Fitness, Society & Lifestyle | 21 comments
Computer တခုရဲ့Keyboard တခုတွင် Bacteria သန်းနှင့်ချီပြီး ပေါက်ဖွား
ရှင်သန်နိူင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိရသည်။
ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ . . . .
ကွန်ပျူတာတစ်စုံ ရှိ Keyboard မှာ Office တခုရဲ့ အများသုံး Toilet ထက်၅ ဆ ပိုညစ်ပတ်ပါသတဲ့ ။
မယုံမရှိကြပါနဲ့ ။ London National Laboratory တစ်ခုရဲ့ တိကျသေချာသော သုသေသန လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုကနေ ရရှိလာတဲ့ Reslut တစ်ခုပါ၊
Computer တခုရဲ့Keyboard တခုတွင် Bacteria သန်းနှင့်ချီပြီး ပေါက်ဖွား ရှင်သန်နိူင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိရသည်။
ထို Bacteria များသည် လူတို့ အား အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း (ဗိုက်ထဲတွင်မအီမသာဖြစ် ပြီး ၀မ်းလျောခြင်း ) မှ အစ သေစေနိူင်လောက်သည့် ရောဂါများ အထိ ဖြစ်ပွား ပျံ့ နှံ့ စေနိူင်သည်။
ပြီးခဲ့ သည့် မကြာသေးမီ ကာလက ရန်ကုန်မြို့တွင် လူမသိသူမသိအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ သည်။
တခြားတော့ မဟုတ်ပါ Computer Keyboard မှ Bacteria များက မွေးကင်းစကလေးငယ် တစ်ဦးကို ဆုံးပါး သွားစေခဲ့ သည်။
အသက်ကြီးမှာ အိမ်ထောင်ကျသော ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး တို့ တွင် အသက် ၃၀ကျော်မှ ရသောကလေးလေး ဖြစ်သည်။အသက်ကြီးမှ ရသောကလေးမို့ မိဘများက တအားတန်ဖိုးထားသည့် (Precious Baby )လေး ဖြစ်သည်။
အဖေဖြစ်သူက Computer Programmer – တနေကုန် Computer ရှေ့ တွင် အလုပ်ရှုပ်နေသူ ရုံးကပြန်လာ တိုင်း လုပ်လေ့လုပ်ထရှိသည့် အကျင့်လေးတစ်ခုက သားလေးကိုချီပြီး နမ်း တတ်သည်။ ကလေးက မွေးကင်းစ (Baby ) လေး ။ ၁၀ ရက်သားခန့် သာရှိသေးသည့် တအားနုနယ်သည့်ကလေးလေးပေါ့။ သိပ်မကြာ ကလေးက ဖျားပြီး ခန္ဒာကိုယ်တစ်ခုလုံးနီရဲ ရောင်ရမ်းလာကာ ဆေးရုံတက်ရက်သည်။ ဆရာဝန်များက မွေးကင်းစကလေး ပိုးဝင် ရောဂါ (Neonatal Sepsis) ဟုဆိုသည်။ ၂ ရက်မြောက် ဆေးရုံပေါ်တွင် ကလေးမှာ သေသွားရှာသည်။
မိဘတွေက လည်း ဘယ်နေမလဲ။ သူတို့ ကလေး ဘယ်လို သေရသလဲ ?
အကြောင်းအရင်းကိုရှာသည်။ မိခင်ဖြစ်သူမှာ ကလေးကို နိူ့ တိုက်သည် မှအပ တခြားအချိန်တွင်အထိအတွေ့ နည်းသည်။နိူ့ တိုက်ကျွေးသည့်အချိန်တွင်လည်း တကယ့် သန့်သန့် ရှင်းရှင်း စနစ်တကျရှိလှသည်။ တခြားထိတွေ့ သူမှာ အဖေဖြစ်သူသာလျှင်ရှိတော့သည်။ တနေကုန်ရုံးမှာ အလုပ်လုပ် ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း လက်တောင်မဆေးပဲ ကလေးကို ချီ ပြီးနမ်း ရှုတ်တတ်သည့်အဖေ ။ သူ့ ကိုသူ သံသယ၀င်ပြီး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ဆရာဝန်၏ အကူ အညီဖြင့် ဓာတ်ခွဲ ခန်း တစ်ခု တွင် သူ့ လက်မှာ ရှိတဲ့ Bacteria တွေကိုCulture လုပ်ကြည့်တော့ တွေ့ လိုက်ရသည်မှာ သူ လက်တွင် ကပ်ငြိနေသည့် Bacteria က အမျိုးပေါင်း များစွာပင်။ ထို Bacteria တွေ က နုနယ်သည့် (immature baby) လေး ကို သေသွားစေခဲ့ ရလေသည်။
ထို ဥပမာလေးကို သင်ခန်းစာယူ ပြီး Computer သုံးပြီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် သေချာစွာဆေးကြောကြပါ။
ဒီနေ့ ခေတ်တွင် အင်တာနက်ဆိုင်တွေများပြားလာပြီး ထိုဆိုင်များရှိစက်များမှာ လူတန်းစားပေါင်း စုံကသုံးစွဲ နေကြ တော့ ညစ်ပတ်မှာကအသေအချာပင်။ ထို ကြောင့် မည်သူ မဆို Computer သုံးပြီးတိုင်းလက်ဆေးသည့် အကျင့်ကိုဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ တစ်ချို့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ရဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေမှာ လက်ဆေးရန် စနစ်တကျလုပ်ထားပေးသည်များရှိသည်။ဆိုင်တိုင်းမှာလည်း လုပ်ထားပေးသင့်သည်။
မြန်မာနိူင်ငံ မှာရှိနေသည့် Foreigner အများစုမှာ Hand Sanitizer ခေါ်Spray ဘူးလေးများဆောင်ထား ကြသည်။သူတို့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးပြီးတိုင်း လက်ကို Hand Spray ဖြင့် သန့်စင်ကြသည်ကိုတွေ့ ဖူးသည်။
ထိုနည်းကတော့ ပို ပြီးကောင်းသည်။ ရေကိုင်စရာမလို ဆပ်ပြာကိုင်စရာမလို ပဲသန့် စင်နိူင်သည်။
ထိုကဲ့သို့ပစ္စည်းမျိုးကို မသုံးနိူင်ရင်တောင်မှ ဆပ်ပြာနှင့်သေချာစွာဆေးကြောသင့်သည်။
သင်တို့၏လက်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထားခြင်းဖြင့် သင်တို့ ဘ၀တွေပိုပြီး လှပသာယာနိူင်ကြပါစေ။
Post by; ပလီပလာ ထွေကာလီကာ
ခင်ခဖေ့ဘုတ်မှာဖတ်ရတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းလေးမို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း နီးပါး ..
ကွန်ပူတာ တဖြောင်းဖြောင်း ရိုက်နေရတဲ့ လူတွေအတွက်
သတိပြုစရာ အချက်ပါပဲ ….။
ကျုပ်လည်း ဖက်ခါ နမ်းကာ နီးရင်
ဒဒိထားရမယ် .. ဟဲ .. ဟဲ ..
ပထမဆုံး လာရောက်ကွန့်သူ မဟာရာဇာ ကိုအံစာတုံးရေ ကျေးဇူးဗျို့။
ဒါနဲ့နေပါအုံး ဖက်ခါ နမ်းကာ နီးရင် ဒဒိထားမယ်ဆိုရင် အနမ်းခံရခါနီးရော သတိထားဖြစ်မလားလို့
သူဂလေးဂသာ နမ်းမယ်ဆို …
အသက်ပင် သေသေပေါ့လို့ .. ဟီးဟီး ..
တော်ပြီ လက်ဆေးပြီးမှ နမ်းမယ် ( သားသား ကို )
အနော်တို့က လက်ဆေးချိန်မရအောင်ကို ကွန်ပြူတာသုံးရတာကလား။
ဟီး။ ကိုခ စိတ်ဆိုးနဲ့။
အနော်ကတော့ ဒက်တော ဝက်တစ်ရှူးလေး ဆောင်ထားတာလို့ ပြောမလို့။
အများသုံးရတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေအတွက် ပိုပြီး သတိထားစရာပါ။
မိမိတစ်ယောက်ထဲသုံးတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေအတွက်က အများသုံးလောက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေမှု့ နည်းနိုင်ပါတယ် မခိုင်ဇာရေ။
ပြီးတော့ နုနယ်တဲ့ကလေးတွေ အတွက်ထိခိုက်လွယ်တာမျိုးပါ။
ကိုခ လုပ်တာနဲ့ ပဲ နောက်နေ့ ရုံးကပြန်ရင်… လက်ဆေးရမယ့်အလုပ်တစ်ခုတိုးလာပီဗျ..။ မျှဝေမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျုပ် လဲ ပက်ဘလစ်စင်တာမှာ ထိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့
လေးခရေ လက်ဆေးဖို့မှတ်သွားလိုက်ပါပြီဗျို့ 
ကွန်ပျုတာ သုံးပြီးတိုင်း လက်ဆေးရန် လို့
ပိုသေချာအောင် စက်ထဲမှာပါ ရေးထားလိုက်မယ်
ပုဆိုးအထက်နားကို ပါးစပ်သုပ်ပြီး အောက်နားကိုလက်သုပ်တာဆိုတော့
ကိုင်းးးးးး လာလေ့ကွန်ပျူတာကိုင်ပြီးရင် အလယ်သားနဲ့ သုပ်တော့မယ်
ဟ ဟ တတ်လည်းတတ်နိုင်ပါပေ့ ဦးဆာမိရေ။
ရွာသူားအားလုံးက ကွန်ပြူတာသုံးမှ ရွာထဲဝင်လို့ရတာဆိုတော့
အားလုံးအတွက် စဉ်းစားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကွန်ပြူတာမသုံးခင် လက်ဆေးဖို့လဲ အကြံပြု ထပ်ဖြည့်ပါရစေ။
ကီးဘုတ်မှာ ပိုးပေါင်းများစွာ ကပ်နေမယ် ဆိုတာ သိထားပေမဲ့.. မကင်းကွာနိုင်လို့ ဒီလိုပဲ နေနေရပါတယ် အန်ကယ်ရယ်.. အခုတော့ လက်သွားဆေးလိုက်အုန်းမယ်။
တူမလေး ဆူး ရေ၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီ အနီးမို့ အခု လက်သွားဆေးတာ ထမင်းစားမလို့တော့ ဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
သေချာတာပေါ့ ဦးလေးရယ်.. အခုတော့ စားပြိး ၀ါးပြီး ပြန်လာ ကြည့်တော့မှ မြင်တယ်။
ကွန်ပျုတာသုံးတိုင်း လက်မဆေးတဲ့အပြင် ပါးစပ်ထဲ လက်မလေးထည့်ကိုက်ပြီး စိတ်ကူးကယဉ်လိုက်သေးတာ လေးခပြောမှဘဲ ကိုယ့်ဟာကို ကြောက်လာပြီ လက်သွားဆေးပြီဗျို့
အယ် လက်မလေး ပါးစပ်ထဲထဲ့လိုက် ကွန်ပျူတာသုံးလိုက် အဲလိုတော့ မလုပ်နဲ့လေ မိဗုံရေ။
ဘတ်စ်ကားလက်ကိုင်တန်းလဲတူတူဘဲ..New York ကမြို့ပတ်ရထားတွေမှာပိုဆိုးသေးတယ်..တချို့ကျတော့လက်တန်းမကိုင်ခင်
ကြုံရာအင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကြုံရာ ကီးဘုတ်နဲ့ သုံးရတဲ့ ကျနော်က တော့ပိုသတိထားရမယ်။
ကွန်ပူတာရှေ့မှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီ သုံးနေ၇တဲ့
ဒါမှမဟုတ် ကီဘုတ်ကြီးကိုပဲ ရေဆေးပစ်လိုက်ရမလား